सन्तोष यादव बिहीबार, पुस २७, २०७४ 22763 पटक पढिएको
गाडेको युवकलाई खाल्टोबाट निकाल्दै स्थानीय। तस्बिर : सन्तोष यादव
सिरहा : मानिसलाई खाल्टोमा गाडियो भने कति मिनेट बाँच्न सक्छ ? सायद सबैको उत्तर एउटै हुन्छ, दुई-तीन मिनेट। तर, सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका १ तामासुइया चोकमा एक युवकलाई खाल्टोभित्र गाडेको सात घण्टापछि जीवितै निकालिएको छ।
विभिन्न अनौठा खेल देखाएपछि उनीहरु राम्रो कमाइ पनि गरिरहेका छन्। उनीहरुले एउटा गाउँमा गएपछि करिब सात दिनसम्म दिउँसो दुई घण्टा र राति दुई घण्टा गरी दैनिक चार घण्टा कला देखाउने गरेका छन्। कला देखाउने सो टिमका मो. रियाजले सात दिन खेल देखाउँदा करिब ५०-६० हजार रुपैयाँ कमाउने गरेको बताए। उनले भने, ‘अनौठा खालका खेल देखाएपछि दर्शक खुसी भएर आफँ पैसा दिन्छन्।’